Date My Pet » 5 Zvinhu Unogona Kudzidza About Dating From 50 Noruvara Grey
Akambonzwa mashanu noruvara Grey? Nepo vose hype une chokuita nevanhu chido chokurara uye yakasiyana uye misikanzwa nzira uhuite, panotova zvakadzama zvinoreva. Izvozvo zvingava zvinobvira? chokwadi, ehe. Bhuku rino kunoratidza chido, udo, uye rudo kuburikidza kwepfungwa dzevanhu. Saizvozvo, unogona chaizvoizvo kushandiswa senzvimbo bhaibheri kudanana. Akafarira? Verenga pamusoro kuwana dzakasiyana idzo mashanu noruvara Grey vanogona kukudzidzisa nezvokudanana uye ukama.
chidzidzo #1: Single-pfungwa Attention
mukristu, huru mukono mutambi, anoda Anastasia, ari heroine. Anoita chinangwa chake zvikuru pachena. pfungwa uye zvepabonde ake simba haasi kupera apo vamwe vakadzi Vakamupfekedza vanopinda mufananidzo. Ake bedzi ndeye Anastasia uye Anastasia chete.
Izvi ndizvo chaizvo kudhaka vakadzi vakawanda kunyanya mazuva ano sezvo vanhu rinoti kunaka kuti vanhu kupa kujeka kufarira mumwe mukadzi. Kupa kwako zuva rizere kutarisirwa kubvisa zvinotsausa uye kupa zvizere ziso kuonana kuchabatsira kudzamisa pezvinopiwa zvenyu uye zvinoratidza kuti muri muna nguva.
chidzidzo #2: Zvigayo Zvaishanda uye Intentionality
Nguva dzose kudzora pachake, Christian anosarudza nguva uye kushanda kunyika dzichiri siyana mano uye unyanzvi. Iyewo nguva dzose anotsvaka nzira kupikisa uye kuvandudza pachake somunhu, sezvakangoita Anastasia anoita kana iye rinopedzisa hurukuro yake nemashoko muKristu pasinei rakaoma raiva.
Nepo zvingaita hazviiti, pane varume nevakadzi kunze uko vari kubudirira, ziva, uye mumuviri nomupfungwa hwakanaka. Nokurarama upenyu hune chinangwa kuburikidza kukura zuva uye matambudziko, unogona kuva zvaunogona nokuzvidzora iyo ichaita kuti nemaune yokukwezva zvakafanana mudiwa.
chidzidzo #3: Kuda kuva Chenherera
Kurarama upenyu uzere kushungurudzwa uye kunotevera kwakaita muKristu kutora zvose mumaoko ake pachake uye kufunga zvakapundutsika. Wakati anooneka akadzivira kure pakutanga, mutambi kwemuKristu anova hunokwezva sezvo iye zvishoma nezvishoma anorega Anastasia munyika mupfungwa dzake uye anomurega kumuporesa.
Anastasia, apo vakazadzwa mhosva uye asanyanya, afunga kuti iye chaizvoizvo anoda Christian. Uye apo nyika yake haizivikanwi zvachose uye itsva kwaari, vanombundira iye wake nemararamiro.
Nokuda vanhu uye pfungwa kuti kuratidza manzwiro kunoreva kusava nesimba, zviri kwaishorwa kuvaratidza. Asi chaizvoizvo, kuratidza manzwiro Chokwadi mumwe akasimba zvinhu kuita. Uye ndichikumbira mumwe munhu waunoda zvechokwadi uye chivimbo ona manzwiro aya anobvumira kuremekedzwa uye ukama kudzamisa.
chidzidzo #4: Yokusarudza
Christian anoziva kuti iye ndiani uye zvaanoda muupenyu nokurarama kukwira zvainyatsodiwa uye nokuti zvechokwadi anoziva pachake. Kana asarudza kuti anoda Anastasia, zvechokwadi kunoreva chinhu.
Zvisarudzo yakasimba, kuva wakazadzwa uye pakuhuratidza, kutungamirira misi yenyu kuwedzera proactively goverai mumwe wako kunobatsira kuti vatidzidzise vavariro simba. Nguva dzose zvakanaka kuziva kuti uri zvinongobva aida uye vaishuva.
chidzidzo #5: rudo, rudo, uye Unapologetic Sexual Chido
Predictability ndirwo rufu chido chokurara. Kana muKristu haasi spanking, Kurohwa, kana yaisunga Anastasia kukwira, achakabata, caressing, uye vachikisana naye. HwechiKristu simba, nyorovera, va neukasha, uye zvinozipa yose yakati unapologetically achida Anastasia. Zvino dzoro, Anastasia anodzidza kuda uye kupanga pfungwa dzake uye chin'a kudikanwa naye.
Sexually kuongorora uye kushandisa chichabatsira ukama hwako. kuda, complimenting, uye achida kuti mudiwa wako anofara anoratidza chete kuti une hanya. Chinokosha kuratidza kuti uri wakanaka naye nokuti unoda kuva.
learnings izvi kubva mashanu noruvara Grey kuchakubatsira kukwezva hope naye kana kuwedzera kare rinobhadhara kwako ukama.
Want To Zvokupfimbana Your Woman Dream? Dzidza Kubva Masvosve